လေထု၏5အလွှာ, သူတို့ကဘာတွေလဲ? သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | | သိပ္ပံ, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
ရင်းမြစ် - https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/las-capas-de-la-atmosfera-y-su-contaminacion/
ကျနော်တို့ယခင်ပို့စ်တွင်မြင်သည်အတိုင်း ကမ္ဘာဂြိုဟ် ၎င်းတွင်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအလွှာများစွာရှိပြီး ၄ င်းသည် subsystem လေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ The ကမ္ဘာ၏အလွှာ သူတို့ကပထဝီ၏ subsystem ၌ရှိကြ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ရှိခဲ့ပါတယ် ဇီဝထုသက်ရှိများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကမ္ဘာ၏areaရိယာဖြစ်သည်။ ဟိုက်ထရိုဂျင်သည်ရေတည်ရှိရာကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သာကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အခြား subsistem ကို, လေထုရှိသည်။ လေထု၏အလွှာကဘာတွေလဲ ကြည့်ရအောင်
လေထုသည်ကမ္ဘာမြေကိုပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသောဓာတ်ငွေ့အလွှာဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များထဲတွင်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သောအောက်စီဂျင်ပမာဏကိုထည့်သွင်းထားခြင်းပါဝင်သည်။ သက်ရှိသတ္တဝါများအတွက်လေထု၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့အားနေရောင်ခြည်များနှင့်ပြင်ပမှအေးဂျင့်များဖြစ်သည့်သေးငယ်သောဥက္ကာခဲများသို့မဟုတ်ဂြိုဟ်သိမ်များကဲ့သို့သောအာကာသမှကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
လေထုသည်မတူညီသောဓာတ်ငွေ့များဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ငွေ့များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါဟာအများအားဖြင့်ရေးစပ်သည် နိုက်ထရိုဂျင် (၇၈%)၊ ဒါပေမယ့်ဒီနိုက်ထရိုဂျင်ဟာကြားနေတယ်၊ ​​ဆိုလိုတာကငါတို့ရှူရှိုက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အဲဒါကို metabolize မလုပ်ဘူး။ ငါတို့အသက်ရှင်ဖို့အသုံးပြုကြသည် ၂၁% တွင်တွေ့ရသောအောက်စီဂျင်။ အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေသက်ရှိများ မှလွဲ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိအားလုံးသည်အသက်ရှင်ရန်အောက်စီဂျင်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေထုရှိပါတယ် အလွန်နည်းသောအာရုံစူးစိုက်မှု (1%) ထိုကဲ့သို့သောရေငွေ့, အာဂွန်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အဖြစ်အခြားဓာတ်ငွေ့ကနေ။
ဆောင်းပါးမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း လေထုဖိအား, လေသည်မိုးသည်းထန်စွာ ဖြစ်၍ လေထု၏အောက်ပိုင်းအလွှာများတွင်လေထုပိုမိုများပြားလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အထက်မှလေသည်အောက်တွင်ရှိသောလေကိုအောက်သို့တွန်းထုတ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပိုမိုထူထပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ လေထု၏စုစုပေါင်းဒြပ်ထု၏ 75% ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်နှင့်အမြင့်ဆုံး ၁၁ ကီလိုမီတာကြားတွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမြင့်တွင်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှလေထုသည်သိပ်သည်းမှုန်းလာပြီးပိုမိုပါးလွှာလာသည်။ သို့သော်လေထု၏ကွဲပြားသောအလွှာများကိုအမှတ်အသားပြုသည့်လိုင်းများမရှိပါ။ Karman ရဲ့လိုင်းကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန့်အမြင့်ကိုကမ္ဘာ့လေထု၏အဆုံးနှင့်အာကာသ၏အစအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တက်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်လေထု၏မတူညီသောအလွှာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှု, သိပ်သည်းဆနှင့် function ကိုအတူ။ လေထုတွင်အလွှာငါးခုရှိသည်။ အဆိုပါ troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere နှင့် exosphere ။
လေထု၏အလွှာ။ ရင်းမြစ် - http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
လေထု၏ပထမအလွှာသည် troposphere ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်နှင့်အနီးဆုံး ဒါကြောင့်ငါတို့အလွှာထဲမှာရှိနေတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှ ၁၀-၁၅ ကီလိုမီတာအထိမြင့်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သက်ရှိများရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးသည့်နေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ troposphere အခြေအနေများအပြင် ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခွင့်မပြုပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည့်အမြင့်ကိုတိုးမြှင့်လိုက်သည်နှင့်အပူချိန်နှင့်လေထုဖိအားတို့သည် troposphere တွင်လျော့ကျလာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိသည်အတိုင်းမိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်များသည် troposphere တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ဤရွေ့ကားမိုးလေဝသဖြစ်ရပ်များကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိနေရောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမညီမညာဖြစ်နေသောအပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒီအခြေအနေဖြစ်ပေါ်စေသည် ရေစီးကြောင်းနှင့်လေတိုခြင်း၊ ဖိအားနှင့်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတို့နှင့်အတူလိုက်ပါလာသောကြောင့်မုန်တိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လေယာဉ်ပျံများသည် troposphere အတွင်းသို့ပျံသန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း troposphere အပြင်ဘက်တွင်မည်သည့်မိုform်းတိမ်ပုံစံမျှမဖွဲ့စည်းနိုင်သကဲ့သို့မိုးနှင့်မုန်တိုင်းများလည်းမရှိနိုင်ပါ။
ကျနော်တို့နေထိုင်တဲ့ troposphere မှာရာသီဥတုအခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်။ ရင်းမြစ် - http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
troposphere ရဲ့အမြင့်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့နယ်နိမိတ်အလွှာလို့ခေါ်တယ် ရေတံခွန်။ ဒီနယ်နိမိတ်အလွှာမှာတော့အပူချိန်အလွန်တည်ငြိမ်နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိ။ ထို့ကြောင့်ဤအလွှာကိုသိပ္ပံပညာရှင်များဟုခေါ်ကြသည် "အပူအလွှာ" ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ troposphere ရှိရေငွေ့ကနောက်ထပ်မတက်နိုင်တော့ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအငွေ့မှရေခဲသို့ပြောင်းသွားသည်။ tropopause အတွက်မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုဟ်သည်အငွေ့ပျံ။ အာကာသသို့ရွေ့လျားသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောရေကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ tropopause သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေများကိုတည်ငြိမ်စေပြီးရေကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
လေထု၏အလွှာနှင့်အတူဆက်လက်ကျနော်တို့အခု stratosphere ရှာပါ။ ၎င်းကို tropopause မှတွေ့ရှိပြီးအမြင့် ၁၀-၁၅ ကီလိုမီတာမှ ၄၅-၅၀ ကီလိုမီတာအထိရှိသည်။ stratosphere တွင်အပူသည်အနိမ့်ပိုင်းထက်မြင့်သည်။ အမြင့်တိုးလာသည်နှင့်အမျှနေရောင်ခြည်များပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးသင်၏အပူချိန်လည်းမြင့်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အမြင့်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ရဲ့အပြုအမူဟာ troposphere အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်သော်လည်းစတင်နိမ့်သည်နှင့်အမြင့်တိုးလာသည်နှင့်အမျှအပူချိန်လည်းတိုးလာသည်။
အလင်းရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုကြောင့်ဖြစ်သည် အိုဇုန်းလွှာ အရာ 30 နှင့် 40 ကီလိုမီတာအကြားဖြစ်ပါတယ်။ အိုဇုန်းလွှာသည်အခြားလေထုများထက် stratospheric ozone ၏ပြင်းအားကိုပိုမိုမြင့်မားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုဇုနျးကဘာလဲ နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှကာကွယ်ပေးသည်သို့သော်ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်တွင်အိုဇုန်းလွှာဖြစ်ပေါ်ပါက၎င်းသည်အရေပြား၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောပြင်းထန်သောလေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ် - http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
လေထုအတွင်းလေထု၏ဒေါင်လိုက် ဦး တည်ချက်တွင်မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျှမရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းအလျားလိုက် ဦး တည်ချက်ရှိသောလေများသည်ရောက်ရှိနိုင်သည် မကြာခဏ 200 km / h။ ဤလေနှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုမှာ Stratosphere သို့ရောက်ရှိသည့်အရာဝတ္ထုများသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ CFC များဖြစ်သည်။ ဒီကလိုရင်းနှင့်ဖလိုရင်းတို့ပါဝင်သောဤဓာတ်ငွေ့များသည် stratosphere မှပြင်းထန်သောလေများကြောင့်အိုဇုန်းလွှာကိုပျက်စီးစေပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းပျံ့နှံ့သွားသည်။
အဆိုပါ stratosphere ၏အဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ stratopause ။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအိုဇုန်းလွှာနိဂုံးနှင့်အပူချိန်အလွန်တည်ငြိမ်သော (0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်) ရှိသည့်လေထု၏anရိယာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ stratopause သည် mesosphere ကိုလမ်းပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်လေထု၏အလွှာဖြစ်ပြီးကီလိုမီတာ ၅၀ မှ ၈၀ ကီလိုမီတာသို့လျော့ချနိုင်သည်။ mesosphere ရှိအပူချိန်၏အပြုအမူသည် troposphere ၏အမြင့်နှင့်အညီဆင်းသက်သည်နှင့်တူသည်။ အအေးမိနေပေမယ့်လေထုရဲ့ဒီအလွှာ ဥက္ကာပျံများကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည် သူတို့လောင်ကျွမ်းနေသောလေထုထဲသို့ကျသွားသည့်အခါဤနည်းဖြင့်ညကောင်းကင်၌မီးသွေးလေးများချန်ထားမည်။
အဆိုပါ mesosphere ကတည်းကကတည်းကလေထု၏အပါးလွှာဆုံးအလွှာဖြစ်ပါတယ် စုစုပေါင်းလေထုထု၏ 0,1% သာပါရှိသည် ၎င်းတွင်အပူချိန် -80 ဒီဂရီအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အရေးကြီးသောဓာတုဓာတ်ပြုမှုများသည်ဤအလွှာတွင်ဖြစ်ပွားပြီးလေထုသိပ်သည်းဆနိမ့်ခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာသို့ပြန်လာသောအခါအာကာသယာဉ်ကိုအထောက်အကူပြုသောအမျိုးမျိုးသောလှိုင်းလေထန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်၊ သင်္ဘော၏။
အဆိုပါ mesosphere ၏အဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါသွေးဆုံး။ ၎င်းသည် mesosphere နှင့် thermosphere ကိုခွဲခြားပေးသောနယ်နိမိတ်အလွှာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၈၅-၉၀ ကီလိုမီတာအမြင့်တွင်တည်ရှိပြီးအပူချိန်တည်ငြိမ်ပြီးအလွန်နိမ့်သည်။ Chemiluminescence နှင့် aeroluminescence တုံ့ပြန်မှုများသည်ဤအလွှာတွင်ဖြစ်ပွားသည်။
၎င်းသည်လေထု၏အကျယ်ဆုံးအလွှာဖြစ်သည်။ ကနေချဲ့ထွင် ၆၄၀ ကီလိုမီတာအထိ ၈၀-၉၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။ ဤအချိန်တွင်မည်သည့်လေနှင့်မျှမကျန်ရှိပါ။ ဤအလွှာတွင်ရှိသောအမှုန်များသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်ရေဒီယိုဓာတ်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအလွှာကိုလည်းခေါ်သည် ionosphere အထဲတွင်ရာအရပျယူသောအိုင်းယွန်းများ၏တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ionosphere အပေါ်ကြီးစွာသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ် ရေဒီယိုလှိုင်းများ၏ဝါဒဖြန့်။ transmitter တစ်ခုမှ ionosphere သို့ထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်၏အစိတ်အပိုင်းကို ionized air မှစုပ်ယူပြီးနောက်တစ်ခုသည်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်သို့ပြန်သွားသည်သို့မဟုတ် reflected လုပ်သည်။
Thermosphere မှာအပူချိန်ကအရမ်းမြင့်တယ် ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရောက်သည်။ သာမိုစထရိုမှာတွေ့ရတဲ့အမှုန်အားလုံးဟာနေရောင်ခြည်မှစွမ်းအင်ကိုအလွန်အားသွင်းသည်။ လေထု၏ယခင်အလွှာများကဲ့သို့ပင်ဓာတ်ငွေ့များသည်အညီအမျှပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
The thermosphere မှာငါတို့ရှာတယ် အဆိုပါ magnetosphere။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့မြေထုဆွဲအားစက်ကွင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနေရောင်ခြည်လေမှအကာအကွယ်ပေးသောလေထု၏ဒေသဖြစ်သည်။
လေထု၏နောက်ဆုံးအလွှာသည် exosphere ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်နှင့်အဝေးဆုံးသောအလွှာဖြစ်ပြီး၎င်း၏အမြင့်ကြောင့်၎င်းသည်အကန့်အသတ်မဲ့ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်လေထု၏အလွှာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်အမြင့် ၆၀၀ မှ ၈၀၀ ကြားကီလိုမီတာ ၉၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ကြားအထိရှိသည်။ လေထု၏ဤအလွှာကဘာလဲ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုအာကာသထဲမှခွဲထုတ်သည် နှင့်အထဲတွင်အက်တမ်လွတ်မြောက်ရန်။ ၎င်းကိုအများအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များကိုလေထု၏အလွှာတွင်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောလေများနှင့်ဖိအားများမှအိုဇုန်းလွှာနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များမှတဆင့်လေထုအလွှာတစ်ခုစီတွင် ၄ င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းရှင်သန်စေသည်။
La လေထု ငါတို့ယနေ့သိသော ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုယနေ့တည်ရှိပြီးကတည်းကနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားပြီး၎င်းသည်လေထု၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိပထမဆုံးအကြိမ်လေထုသည်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်အရှည်ကြာဆုံးရေရှည်မိုးရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဘ ၀ မတိုင်မှီကျွန်ုပ်တို့သိသည်အတိုင်းလေထု၏ဖွဲ့စည်းမှုသည်အများအားဖြင့်မီသိန်းဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း 2.300 ဘီလီယံကျော်ဤအခြေအနေများမှအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည့်သက်ရှိများသည်သက်ရှိများဖြစ်သည် methanogens နှင့် anoxicsဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အသက်ရှင်ရန်အောက်ဆီဂျင်မလိုအပ်ပါ။ ယနေ့ methanogens များသည်ရေကန်များ၏အနည်အနှစ်များသို့မဟုတ်အောက်စီဂျင်မရှိသောနွားများ၏အစာအိမ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အလွန်နုပျိုသေးသဖြင့်နေရောင်ခြည်နည်းပါးသော်လည်းလေထုထဲတွင်မီသိန်းပါဝင်မှုပမာဏရှိသည် ယနေ့လေထုညစ်ညမ်းမှုထက်အဆ ၆၀၀ ကျော်ပိုများသည်။ မီသိန်းဓာတ်သည်အပူများစွာကိုထိန်းထားသဖြင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူချိန်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောဖန်လုံအိမ်အာနိသင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
လေထု၏ဖွဲ့စည်းမှု anoxic အခါ Methanogens ကမ္ဘာမြေအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ရင်းမြစ် - http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
၏ပြန့်ပွားနှင့်အတူနောက်ပိုင်းတွင် cyanobacteria နှင့်ရေညှိ, ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အောက်စီဂျင်နှင့်ပြည့်နှက်ကာလေထု၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်အထိယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောအရာများဖြစ်လာသည်။ သံမဏိပြားများကြောင့်သန္တာကျောက်တန်းများပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ကမ္ဘာမြေ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသို့ကာဗွန်နိတ်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လေထုဟာလျှော့ချတဲ့လေထုကနေအောက်ဆီဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်မြင့်မား။ အနိမ့်ဆုံးနှုန်းကိုပြသနေပြီး၎င်းသည် ၁၅% မျှသောအဆက်မပြတ်ရှိနေခြင်းထက်နည်းသည်ထက်နည်းသွားသည်။
မူလတန်းလေထုသည်မီသိန်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရင်းမြစ် - http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » သိပ္ပံ » လေထု၏အလွှာ
မင်္ဂလာပါ၊ အကယ်၍ လေထုသည်ထောင်ပေါင်းများစွာဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ရောက်ပါကအာကာသယာဉ်တစ်စင်းမည်သို့ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မည်နည်း။
Leonardo ဗန်ဂါးစ် ဟုသူကပြောသည်
Pedro .. ဘယ်သူမှထွက်မထွက်နိုင်ခဲ့ဘူး။
သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေးသေး၏ကမ္ဘာမြေ၏ CGI ပုံရိပ်များကိုကြည့်ပါ, ဘယ်တော့မှအမှန်တကယ်ဓာတ်ပုံမရှိခဲ့ဘူးနှင့်အဘယ်သူမျှမကလှည့်ပတ်ဂြိုလ်တုကိုမြင်ကြပြီမဟုတ် .. ငါ bro ပြောပြပါရစေ .. ငါတို့လှည့်စားခဲ့ကြသည်
LEONEL VENCE MURGAS သို့အကြောင်းပြန်ပါ
« The thermosphere မှာ magnetosphere ကိုတွေ့တယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာမြေရဲ့မြေထုဆွဲအားစက်ကွင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုနေရောင်ခြည်လေကနေအကာအကွယ်ပေးတဲ့လေထုရဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ "
ဤအချက်အလက်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကောင်းစွာရှင်းပြထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ study လေ့လာသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိမိကိုယ်ကိုဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရိုးရှင်းစွာအသိပေးနိူင်တဲ့သူကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ငါဒီစာမျက်နှာကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ်၊ ကောလိပ်မှာပညာသင်တဲ့သူတွေအတွက်အရမ်းအသုံးဝင်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
Luciana Rueda Luna ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ စာမျက်နှာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မုသားတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရှင်းလင်းချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 😘😘😉😉😉
Luciana Rueda Luna အားပြန်ပြောပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် phenolic ပစ္စည်းများရေးစပ်။
Daniela BB😂 ဟုသူကပြောသည်
ဤသည်မှာအလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ studied ၎င်းသည်လေ့လာခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွှာ ၄ ခု ရှိ၍ ၅4ရှိသည်ဟုထင်ခဲ့သည်
rebeca melendez အားပြန်ကြားပါ
Hector MORENO ဟုသူကပြောသည်
လှည့်ဖြားမှုများစွာ၊ အရာရာသည်လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ သင်အာကာသထဲသို့မထွက်သွားနိုင်၊ မှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံး၊ Flat Earth ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နိုးပါ။
HECTOR MORENO သို့ပြန်ပြောပါ
ခရစ်ယာန် roberto ဟုသူကပြောသည်
ငါသိပ္ပံပညာကိုယုံကြည်ပေမယ့်မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းထက်ကျော်လွန်ပြီးမင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖွင့်ပြီးဒီဂြိုဟ်ကိုဘာကြောင့်တီထွင်ခဲ့တာလဲ။ ပညာရေးစနစ်ကဘာလို့အကန့်အသတ်ရှိသလဲဆိုတာကိုမင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ မဟုတ်ရင်လူတစ် ဦး ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်, အခုအချိန်မှာထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကတည်းက, သင်မဖြေနိုင်, သငျသညျကကမ္ဘာမြေမှထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းပြောပါကအမှန်တရားဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာအမှန်တရားဖြစ်ပါသည်, သူကအံ့ and ခြင်းနှင့်ကပြောသည် အကယ်၍ ကမ္ဘာသည်အပြားပြား ဖြစ်၍ ၎င်းမှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြားသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေထိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားရိုးရှင်းသောအဖြေတစ်ခုပေးခဲ့လျှင်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာမဟုတ်ပါကပြားနေမည်ဆိုလျှင်လူတိုင်းကိုကမ္ဘာ့အင်အားဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးမျှတမှုသည်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာတော့အေးတဲ့အပူညဥ့်နက်တဲ့နေ့ဖြစ်လို့ဒီလိုမျှမျှတတရှိမှုကမကောင်းဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမြေကိုလှည့်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့လှည့်လည်သွားရင်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်လို့ဘယ်သူမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခုတည်းသောသံလိုက်စွမ်းအားကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် ၁၃ နှစ်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နိုးပြီး ၄ နှစ်ခန့်အကြာတွင်သင်၏မေးခွန်းကိုအဖြေကောင်းကောင်းကောင်းဖြေနိုင်မည်လားသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ။
christian roberto အားပြန်ကြားပါ
ကမ္ဘာမြေကိုလှည့်ပတ်နေသောလသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် + -160 ဒီဂရီအထိရောက်ရှိနေသောကြောင့် thermosphere တွင်ထောင်ပေါင်းတစ်ထောင်ဒီဂရီရောက်ရှိနိုင်သည်ဟုမထင်ပါ၊ နေနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိသောမာကျူရီတွင်၎င်းသည်လှည့်ပတ်လှည့်ပတ်သည်ဟုခန့်မှန်းသည်ထင်သည်။ အများဆုံးဒီဂရီ ၆၀၀ ဒီဂရီမှာ ၆၀၀ ဒီဂရီရှိတယ်။ ဒါကငါထင်တဲ့စာလုံးပေါင်းအမှောင်ပဲ။
Edwing Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ ကျောင်းကအလုပ်တွေကိုအမြဲကူညီပေးတယ်။
Lysander milesi ဟုသူကပြောသည်
Juan အားတုံ့ပြန်ခြင်း အပူချိန်သည်နေရောင်ခြည်မပေါ်ကိုမူတည်သည်။ အပူချိန်တစ်ခုတည်းကိုပြောခြင်းသည်သင်လုပ်သောအမှားဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုသို့မဟုတ်မလာလျှင်၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လကိုဆင်းသက်မှုသည်နေရောင်ခြည်ဖြင့်ပြုလုပ်သော်လည်းအအေးမိခြင်းဖြစ်သည်။
Lisandro Milesi အားပြန်ပြောပါ
Judith herrera ဟုသူကပြောသည်
ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ကကောင်းတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
judith herrera မှစာပြန်ပါ
aljandro alvarez ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီ site မှအသစ်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါကမ္ဘာမြေ၏စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေစဉ်အစီရင်ခံစာသည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံပြီးအလေးအနက်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဆက်လက်၍ ဥရုဂွေးမှဆက်လက်လေ့လာရန်မျှော်လင့်သည်မဟုတ်ပါ။
Atte Alejandro * သံ * ALVAREZ ။ .. !!!
alejandro alvarez အားပြန်ပြောပါ
Cape Horn၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ကင်းလှည့်ခြင်း